Booramaonline Oo Falanqaysay Haasawaha Iyo Hadal Haynta Suuqyada Boorama Ee Kusaabsan Cidii Noqonlahayd Ama Ku Haboon Duqa La Filayo Inay Magaalada Golaha deegaanka ee dhawaan la doortey kuwaas oo ku guulestey doorashii bishii hore dhamaadkeedii dalka ka dhacdey, ayaa badankoodu waxa ay yihiin dad ku cusub loolanka siyaasada, Boorama oo kale gaar ahaan waa dad dhalinyaro ah golihii deegaanka ee horana qof wax ka badan kagama soo noqon.
Hadaba waxaa jira loolan adag oo 21 xildhibaan ee soo baxay ay ugu tartamayaan jagada duqa degmada Boorama iyo ku xigeenkiisa,in kasata oo dad badan ka niyada jabeen markii lagu dhawaaqey go’aanka natiijada doorshada oo markiiba ay u kala baxeen hab beeleed, hadana waxaa tartankaas ugu cad cad ilaa hada inta la og yahay ilaa afar qof kuwaas oo kal ah Suleymaan Xasan Xaddi, Cabdi Cusmaan Dhagaweyne, Iyo C/Wahaab Bashiir , Saddexdan xildhabaan ayaa dadka wax indha indheeya ka qabaan aragtiyo kala duwan waxaaney goobaha wax lagu xanto aad loogu hadal hayaa falanqaynta waxtarka loo baahan yahay iyo waxyeelada laga ordayo eek u lamaan shaqsiyaadkaasi musharixiinta ah, warbixintan koobana waa mid aan arinkaas ugu kuur galeyno taas oo ah in aa akhristyaasha sharaftaleh u soo gudbino hadalkoodii ama xantoodii sida dhabta ah oo loo ekeysiiyey qoraal.
Bal aan u kala horeysiino sida magacyadoodu u kala horeeyaan waxaanan ku hor mareynaan Mudane Suleymaan Xasan Xaddi. Md Suleymaan waa nin dhalinyaro ah mudo badana ka soo shaqeeyey xafiisyada dawlada iyo hay’adaha NGO-yada wadaniga ah aqoon fiicane leh, waxa la ogsoon yahay in xisbiga Kulmiye ee uu ka soo baxay aanu markiisii hore mawqif ku raacin tanina ay astaan u ah sidii uu isaga sharaxay xisbiga UCID bilowgii tatanka doorashooyinka, waxa kale oo ay dadku ka aaminsan yihiin in hadii jagada uu u ordaayo oo ah Duqa Degmada uu ku guuleysto uu ahaan doono qof u dhaga nugul Xisbiga iyo Xukuumada uu ka tirsan yahay, waxa ay dadku odorosayaan in wax badan dhinaca wax kaqabashada baahiyaha bulshada iyo taabo galinta hormarka loo baahan yahay uu ka hormarin doono u adeega xisbiga talada haya, iyo sidii uu afkaaraha uu isaguba qaatay ee Kulmiye uga dhigi lahaa kuwo ku shuban dhiiga muwaadiniinta ku hareeraysan.
Siyaasada loo baahan yahay waqtiyo badan oo u janjeedha dhinaca xisbul xaakimka ayaanan meesha ka maqnayn inuu waxbadan fulin doono, taasina ay u saamaxi doonto inuu kalsooni badan ka helo madaxda xisbiga iyo kuwa xukuumada, taasina ay sababi karto in uu kalsoonidaas uu ka helay mudo dheer ku sii shaqeeyo hadii loo doorto duqa degmada.
Ninka labaad ee aan halka ku xuseyno ayaa ah Md. Cabdi Cusmaan Dhaga Weyne waa nin da’ dhexaad ah aqoon fiicana leh mudo badana ganacsi ku jirey ilaa hadana ku jira, hadaba waxa ay dadku u arkaan in uu daacid ah, Habka maamulka Si Wanaagsan u garan kara,bulshaawiya , Xisbulxaakimka Kulmiye ee uu maanta shaadhkiisa huwn yahay kuma raacin afkaar iyo aragtiyo soojireen ah, waxana tani u daliil ah isaga oo markii hore iska sharaxay urursiyaasadeedka WADANI, markii bambana iska casilay.
Dhinaca kale hadii Mud. Cabdi Cismaan Dhagawayne loo doorto jagada Duqa Boorama waa nin waxbadan u adeegaya dhinaca hormarka iyo waxqabadka ay bulshadau rabto, kuna dhegen siyaasada odhanaysa aan wax wada qabsano waa aan horumar gaadhno rabana in uu ka sii ambaqaado halka ay iminka wax taagan yihiin diidana in waxwalba dib u noqdaan.
Mudane Cabdi cismaan oo run ahaantii dadwaynaha ku dhaqan magaalada Boorama ay hadalhayaan in ay wanaagsanaan lahayd maadaama uu leeyahay khibrad maamul iyo mid aqooneedba kana saacidi karto nidaamka maamul ee uu wax ku wadi doono hadii uu ku guulaysto jagadan.
Mudane C/wahaab Bashiir ah macalin,suugaan yahan aqoon ilaa heer jaamacdeedna leh waa nin waa sida ay dadku yidhaahdeena talo tusaale wixii la siiyo qaadanaya inkasata oo marka la yidhaahdo arimaha dawladaha hoose uu ku cusub yahay oo aanu wax khibrad ah oo sidaas u sii badan lahayn.”
Si kastaba ha ahaatee waxaa ay dadwaynaha ku dhaqan magaalada Boorama u dhegtaagayaan maalmahan soo socda cida ay ku aamini doonaan mustaqbalkooda iyo horumarkooda waqtiyada fog iyo kuwan dhaw cidii uu noqon lahaa waxaana ay gacanta ugu jirtaa 21Xildhibaan ee ay soo doorteen.’
Reporter: Khadar Maxamed Ibraahim (Safar)